45KGS Baling Wire, Shina 45KGS Baling Wire Manufacturers, mpamatsy, orinasa - Ningbo Judin Special Monofilament Co., Ltd
Halava isaky ny coil: 2500 m
Dimension ny horonana: φ 550x 270mm
Natolotra tamin'ny kofehy 2500 Meter, milanja 45 kg fotsiny, izay mitovy amin'ny tariby vy 145 kg eo ho eo. Noho izany, rehefa apetaka amin'ny RDF / SRF Baler miaraka aminà fehezan-tsakafo fananana (izay azo atao milahatra) dia mihena be ny fikirakirana sy ny tahirin'ny asa natao mba hatakalo Reels, izay tombony ho an'ireo miasa.
Ny Reel tsirairay dia matetika mamokatra balana 530 (mifototra amin'ny haben'ny bale 1.2m X 1m X 1m) ary hamonjy fotoana be dia be ho an'ireo miasa. Ny Judin Plastika Wire dia manana fantsom-pandrefesana mitovy amin'ny tariby vy ambany ary azo antoka / matanjaka ampiasaina.
Tsipika Star Trimmer avo lenta ho an'ny strimmer